सबै कर्मचारीले सुगम रोजे दुर्गममा कस्ले काम गर्छ ? — Raranews.com
उच्च माध्यामिक तहको पढाईका लागि बहुमुखी क्याम्पस जुम्लामा भर्ना भए । रोजाई थियो प्राविधिक बिषय तर सम्भव भएन्,प्राविधिक बिषयको पढाई ।
प्लस टु उत्र्तीण गरेसँगै गाउँकै एउटा नीजि विद्यालयको शिक्षक बने । त्यो जागिरबाट पहिलो तलब हात थापे,३ हजार । पढाई र घर परिवारका लागि केही भरथेग भयो । जिन्दगीमा अक्सर अवसरै अवसरले पछ्याइरहेको हुन्छ । मात्र त्यो अवसरलाई छोप्न जान्नुपर्दछ । त्यही कार्यरत रहँदा अर्काे अवसर भेटियो । तलब त्यहाँभन्दा १४ सय बढी ।
जीवन सरकै साथ सहयोग पाएर म छिरेको काठमाडौं । त्रिविविमा मास्टर डिग्री भर्ना भए । जिन्दगीको लिक सजिलै रेखामा आफूले सोचेझैं कहाँ हिड्छ र ?बक्र,उबडखाबड छ जीवनको बाटो । जुम्लाबाट काठमाडौं छिर्दा योजना थियो कतै नीजि विद्यालयमा पढाएर भए पनि जीवनको गति अघि बढाउँला तर शहरमा सहजै कहाँबाट भेटिन्छ र नोकरी ?
शिक्षणको जागिर खोजिरहेको मेरा आँखा एउटा सरकारी विज्ञापनमा पर्यो । शान्ति मन्त्रालय मातहतको विज्ञापन थियो त्यो । आवेदन दिँए । आफ्नै गृह जिल्ला जुम्लामा स्थानीय शान्ति समितिको अधिकृत भएर काम गर्न पाउने अवसर थियो ।जीवन नियमले होइन,संयोगले चल्दछ भन्छन् । संयोगवश नाम निस्कियो । त्यो अस्थायी जागिर थियो ।
काम गर्दै गर्दा स्थायी नियुक्ति लिएर काम गर्ने रहर जाग्यो । चैत महिनामा विद्यालय निरिक्षकका लागि आवेदन खुल्यो,परीक्षा दिए । असफलता हात लाग्यो । निराश भइन्,जेठमा प्राविधिक साहायकका लागि दरखास्त आह्वान भयो,भिडे । नाम निस्कियो । नौ बर्ष अघि ०६७ कार्तिक १७ गते नेपाल सरकारको स्थायी नियुक्ती पाएँको हुँ नायब सुब्बा तहबाट ।
पहिलो पोष्टिं जिल्ला शिक्षा कार्यालय कालिकोटमा भयो । परीक्षा अनुगमन गर्दा शिक्षा कार्यालको काम अन्तर्गत प्राय सबै वडामा घुम्ने मौका मिल्यो । करिव चार वर्षसम्म त्यहाँ रहेर काम गरँे । जब काम मनैदेखि गरिन्छ,रोजेकै पेशा गर्न पाइन्छ,काम काम जस्तो लाग्दो रहेनछ । ४ बर्ष वितेकैपत्तै पाइएन ।
सरकारी सेवामा अझैं माथि जाने आकाक्षा थियो,अधिकृतस्तरको पढाईको तयारी गर्दैथिए ०७१ सालमा शिक्षा कार्यालय जुम्लामा सरुवा भयो ।प्रशासन सेवातिर फड्को मार्ने चाहना थियो । आबेदन दिए, ०७२ सालमा अधिकृतमा नाम निस्कियो तर वैकल्पिकमा । ०७४ सालमा अधिकृतमा नाम निस्किएपछि म प्रशासन सेवातर्फ यूटर्न भए ।
०७५ सालमा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा डोल्पामा खटिए । त्यहाँबाट तातोपानी गाउँपालिका,जुम्लाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा भए ।१० महिना त्यहाँ सेवा गरेपछि बराहताल गाउँपालिका सुर्खेत हुँदै अहिले रसुवा जिल्लाको नौकुण्ड गाउँपालिकामा कार्यरत छु ।
ekarmachari.com ……….बाट साभार